सावधान ! मृगौला फेल हुनु अघि देखिन्छन् यस्ता संकेतहरु,कसरी बच्ने ?
शरीरमा रस एवं रगतमा उपस्थित विजातीय तथा अनावश्यक तत्वलाई पिशाबबाट बाहिर निकाल्ने काम मिर्गौला अर्थात् किड्नीले गर्दछ । किड्नीको विशेष सम्बन्ध मुटु, फेक्सो, कलेजोसाथ हुन्छ । मुख्यगरी मुटु र किड्नीले परस्पर सहयोगको साथ काम गर्ने गर्दछ । त्यसकारण, यदि कसैलाई मुटु रोग लागेको छ भने उसको किड्नी पनि विग्रन्छ ।
किडनीका रोगीहरु दिनानुदिन बढीरहेका छन् । यसको मुख्य कारण मुटु, दम, टि.बी., सुगर, प्रेसरजस्ता रोगहरुको निदानका लागि भनेर आधुनिक औषधीहरुको बढी सेवन गर्नु हो । यी आधुनिक औषधिहरुको विषाक्त प्रभावका कारण नै किड्नी तथा पिशाबसम्बन्धी रोग उत्पन्न हुन्छ ।
यदि एउटा किड्नी पूर्णरुपमा खराब भयो भने पनि अर्को किड्नीले शरीरलाई ठीक रुपमा सञ्चालन गर्दछ ।
१. पिसावको मात्रा अचानक वा विस्तारै कम हुँदै जानु
२. शरीर सुन्निन थाल्छ, विशेषगरी अनुहार
३. मन स्थिर नहुनु वा वान्ता हुनु
४. रक्तचाप अचानक बढ्नु
५. निरन्तर रगतको कमी हुँदै जानु
६. तौल अचानक कम हुनु
मृगौला फेल हुनबाट बच्ने ५ उपायहरु यस्ता छन्ः
धुम्रपान, मद्यपान, जंक फूडबाट टाढै बस्नुहोस् । यसले मृगौलामा टक्सिन जम्मा हुन दिँदैन ।